Shiinaha Doofaarka Doofaarka leh ee warshad iyo soosaarayaal ilaaliya | Huikang
Hilibka doofaarka la kariyey waa saxan caan ah oo caan ah, cunnooyin kasta oo waaweynna waxay leeyihiin hilib doofaar gaar ah oo la dubay. Waxay u isticmaashaa caloosha doofaarka maaddada ugu muhiimsan, waxaana ugu wanaagsan in la isticmaalo dufanka iyo khafiifka ah hilibka saddexda lakab ah (caloosha doofaarka). Dherigu inta badan waa casserole. Hilibku waa buuran yahay oo dhuuban yahay, macaan oo jilicsan, hodan ku ah nafaqada, afka ayuu ku dhalaalaa.
Hilibka doofaarka lagu kariyey ee maraqa buniga ah ayaa si ballaaran ugu baahsan dalkeena oo dhan. Waxaa jira ilaa 20 ama 30 habab, kuwaas oo leh qiime nafaqo leh.
Mid ku tababar
Waxyaabaha ay ka kooban tahay: caloosha doofaarka, sooska soya, suuxda xididka, sinjibiil, basbaas, saliid hemp, sonkorta dhagaxa, toonta, cusbo
1. Diyaarso maaddooyinka, maydh caloosha doofaarka oo u jarjar gogosha mahjong;
2. Dheriga ku kululey saliidda sisinta, sinjibiil sauté, toon, basbaas iyo anise xiddig;
3. Ku shub caloosha doofaarka iskuna walaaq illaa labada dhinac ay waxyar ka gubanayaan, ku dar khamri wax lagu karsado ama khamri cad, sooska soodhaha, sonkorta dhagaxa ah;
4. Ku wareeji dheriga weelka leh qadar sax ah oo biyo karkaraya, isku kari ilaa saacad kuleylka aayar. Waxaa lagama maarmaan ah in si isdaba joog ah loo rogo, hal dhinac, si siman loo midabeeyo dheriga, dhinaca kale si looga fogaado in maqaarka doofaarka lagu dhejiyo dheriga. Kaliya ku saydh qaar ka mid ah basbaas iyo milix ka hor intaadan u adeegin.
5. U adeeg oo si sax ah u dejiso, rabitaanka cuntada ayaa ka fiicnaan doona.
1. Caloosha doofaarka maqaarka saaran u jarjar laba jibbaaran, jarjar basasha iyo sinjibiil xaleef waaweyn.
2. Saliid ku shub dheriga si aad u kululeyso, ku dar sonkor cad oo walaaq shiil. Markay isku badasho midab sonkor ah, ku dar hilibka, ku dar qadar biyo ah, kuna kari suugo soy ah, cusbo, sonkor, basal cagaaran, sinjibiil, xiddig xidid ah, caleenta dubka, iyo kuleylka kuleylka yar. - Ku keydi 1.5 saacadood.
Hore: Digaag la jarjarey Oo Basbaas ah
Xiga: Filimka hilibka lo'da ee Sichuan iyo Hunan